मातातीर्थ औँशी, आमाको नाममा श्राद्ध र तर्पण दिनेहरुको भीड ! « Nepal Bahas
मातातीर्थ औँशी, आमाको नाममा श्राद्ध र तर्पण दिनेहरुको भीड !
भक्तजनको सुविधाका लागि सुरक्षाकर्मी
प्रकाशित मिति : २१ बैशाख २०७६, शनिबार ११:३१
काठमाडौं । आज मातातीर्थ औँसी । देशभरका विभिन्न धार्मिक स्थलहरुमा आफ्ना दिवंगत आमाको नाममा श्राद्ध र तर्पण दिनेहरुको भीड लाग्ने गरेको छ ।
आजकै दिन विशेषगरी चन्द्रागिरि नगरपालिकास्थित मातातीर्थ कुण्डमा स्नान गर्नका लागि बिहानैदेखि भक्तजनको भीड लागेको छ। प्रत्येक वर्ष वैशाख कृष्ण औँसीको दिन आमाको मुख हेर्ने दिन वा मातातीर्थ औँसीका दिन यहाँ मेला लाग्ने गर्दछ ।
उक्त कुण्डमा वैशाख कृष्ण औँसीका दिन एक जना ग्वालाले प्यास लागेर पानी खान जाँदा दिवंगत भएकी आफ्नो माताको स्वरुप देखेको किंवदन्ती पाइन्छ । नगरपालिकाका उपप्रमुख लीसा नकर्मीले त्यहाँ आउने भक्तजनको सुविधाका लागि सुरक्षाकर्मी, स्वयम्सेवकको व्यवस्थापन गरिएको जानकारी दिइन् ।
उनका अनुसार दिवंगत भएकी माता प्रसन्न भइदिएको आशीर्वादको प्रभावले छोराछोरीहरू शान्ति, सुखी र समृद्धि हुने पनि विश्वास गरिएको छ । उक्त स्थानलाई धार्मिक पर्यटकीयस्थलका रुपमा प्रवद्र्धन गर्न गृहकार्य भइरहेको उपप्रमुख नकर्मीले जानकारी दिइन्
विशेषगरी आमा दिवंगत भएका भक्तजन आउने उक्त तीर्थस्थलमा काठमाडौँ तथा त्यस वरपर क्षेत्रबाट भक्तजनको सहभागिता बढेको छ ।
आमाप्रति सम्मान गर्ने र आमालाई सम्झने दिनका रुपमा हिन्दूले यस दिन दिवसका रुपमा मनाउने गर्दछन् । स्थानीय गुर्जुधारादेखि मातातीर्थसम्म चल्ने सवारी साधनलाई यस दिन निषेध गरी अन्यत्रैबाट वैकल्पिक व्यवस्था गरिएको छ ।
#श्राद्ध र तर्पण